Chishanu 26 Kurume 2021
Cafe Kupindura kuchidimbu kune yazvino, yakachena inoyevedza, yemukati yakafuridzirwa nematanda emichero makatoni anoshandiswa mune fomu fomu yakagadzirwa. Makatekete anozadza nzvimbo, achigadzira inonyudza, ingaite kunge bako remawenga, asi iri iro rakagadzirwa kubva nyore uye rakatwasuka maumbirwo ejometri. Mhedzisiro yacho ndeye yakachena uye inodzorwa nzvimbo spatial. Iyo yakangwara dhizaini inokudzawo nzvimbo shoma nekushandura anoshanda zvigadziriso kuita ekushongedza maficha. Iwo mwenje, makapu makabati uye masherufu anobatsira kune dhizaini yekugadzira uye yekuverengeka kwekuona.
China 25 Kurume 2021
Chitatu 24 Kurume 2021
Kuvheneka Chimiro chemwenje Capsule chinodzokorora chimiro chemakapu chakafararira kwazvo munyika yemazuva ano: mishonga, zvivakwa zvekuvaka, masportships, thermoses, machubhu, nguva macapuro anoendesa mameseji kuvazukuru kwemakumi emakore. Inogona kuva yemhando mbiri: yakajairwa uye yakareba. Mwenje unowanikwa mune akati wandei mavara ane akasiyana madhigirii ekujeka. Kubata netambo dzenylon kunowedzera chinhu chakaitwa nemaoko kumwenje. Maitiro ayo epasirese aive ekuziva hunyoro hwekugadzira uye huwandu hwekugadzirwa. Kuchengetedza mukugadzirwa kwekuita kwerambi ndiyo mukana wayo mukuru.
Chipiri 23 Kurume 2021
Pavilion ResoNet Pavilion inorayirwa neSinan Mansions muShanghai yekupemberera kweChinese Nyowani 2017. Iyo ine yepamhepo yepasirosi pamwe neinopindira LED mwenje "resonet" rakabatanidzwa mukati memukati. Iyo inoshandisa Low-Fi nzira yekuona mafashoni ekuwanika mukati mezvakasikwa, kuburikidza nekudyidzana neruzhinji uye zvinhu zvakapoteredzwa zvakawanikwa neTB net. Iyo Pavilion inojekesa nzvimbo yeveruzhinji mukupindura kune vibration inosimudzira. Kunze kwevashanyi vanogona kuuya kuzoita Spring Festival zvido, inogona zvakare kushandiswa seyenzvimbo yekuita.
Muvhuro 22 Kurume 2021
Hofisi Yebasa Pfungwa yepurojekiti ndeye "kubatanidza hofisi neguta" vachitora mukana wenzvimbo. Iyo saiti iri pane iyo nzvimbo iyo inotarisisa guta. Kuti uwane iyo inowira mugero wakagadzirirwa nzvimbo inotorwa, iyo inopfuura kubva kune gedhi rekupinda kusvika kumagumo enzvimbo yehofisi. Mutsetse wehuni wedenga uye weganda dema iro rakaiswa mwenje uye mhepo-mamiriro magadzirirwo zvinosimbisa yakananga guta.
Svondo 21 Kurume 2021
Armchair Iyo Lollipop armchair mubatanidzwa wemasikirwo asina kujairika uye mafashoni mavara. Yayo silhouettes uye mavara emavara aifanira kutaridzika kure semapipi, asi panguva imwecheteyo ruoko rwemacheya runofanira kukwana mukati mezvipfeko zvemhando dzakasiyana. Iyo chupa-chups chimiro chakaumba iyo hwaro hwekushongedza kumashure uye pachigaro uye chigaro chakagadzirwa nenzira yemakristuru emakuru. Iyo Lollipop armchair yakagadzirirwa vanhu vanofarira zvoushingi zvisarudzo uye fashoni, asi havadi kusiya simba uye nyaradzo.
NISSAN Calendar 2013 Kalendari Chishanu 18 Chikumi
GlassOn 40 "inotungamirwa Tv China 17 Chikumi
Tango Pouch Chikwama, Bag Remanheru Ndoimwe Chitatu 16 Chikumi
Cafe Christal Mwenje Chifananidzo Kuvheneka Pavilion Hofisi Yebasa Armchair